Microstation: Phrinta iimephu kubeko -eGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2011 cadastre, Microstation-Bentley
Kwi-AutoCAD yenye yezona zinto ziluncedo kulawulo lwezakhiwo, ezimela izithuba zamaphepha ezineefestile ukusuka kumzobo ukuya kwizikali ezahlukeneyo. I-Microstation ibenayo ukusukela kwiinguqulelo ze-8.5 nangona unxibelelwano lomsebenzi lungafani ncam, masibone ukuba singayenza njani imephu ye-1: Imephu ye-1,000 yokuqinisa into esiyifumana kwimephu. I-AutoCAD Course kudala Ndikucebisa ukuba ubone inqaku apho ndibonisile uyakha njani ibhloko (iseli), yesakhelo esingaphandle.
Le mephu ingumzekelo, apho indawo ibekwe khona kunye ne-1: i-1,000 igridi yakhelwe, kwaye into endiyifunayo kukwenza iimephu ezikhupheyo zilungele ukuprintwa, ngaphandle kokuphindeka kabini kwaye ngenjongo yokugqibela ukuba uhlaziyo lwenziwe kuphela endaweni ifayile
Uyakha njani uyilo
Kwi-Microstation uyilo olwaziwayo luyaziwa ngokuba yiModeli, kwaye luyilwe ukusuka kwipaneli ephezulu, njengoko kuboniswe apha ngasentla. Emva koko sikhetha i-icon entsha yemodeli.
Kwiphaneli ebonakalayo, sikhetha uhlobo lweSheets, sinika igama ukuba kule meko iya kuba yi-CN22-1J, iphepha le-Arch D elingu-24 "x36". Emva koko nantsi isitshixo esisisiseko, esiyiqaku lokufakelwa.
Khumbula ukuba imodyuli yethu eyenziwe njengeseli inendawo yokufakelwa kwikona yegridi, ke kufuneka sine-veicker yokufudusa kwikona yephepha apho ufaka khona izixhumanisi eziza kubakho kwikona yephepha. (Jonga inqaku Ukudalwa kwemodyuli ukuyiqonda)
Oku kwenza ukuba iphepha lethu liqondwe ngakumbi kwindawo enomdla kuthi kwinyathelo elilandelayo.
Ulufumana njani ulwazi kulwakhiwo
Ifayile yesalathiso ilayishwe (ngokwayo), emva koko sidweba i-polygon evaliweyo kwigridi esinomdla wokusika.
Ngoku, sichukumisa ifayile yesalathiso kunye neqhosha lokusika. Ke, sikhetha ukhetho kwinto, sichukumisa isakhelo kwaye emva koko siya kuthi imephu ibonakale njengoko sinomdla. Akazange acime into esingayiboni, usike nje kwaye wafihla okungaphandle kwepholigoni.
Ukubeka isakhelo, emva koko sibiza ibhloko (iseli) esiyenzileyo kwinqaku elidlulileyo, kwaye siyifaka kwikona yenzalo.
Kwaye apho sinayo, imephu ye-1: 1,000 kwisakhiwo. Ibhloko yemodyuli inokungaxutywa ukwenza uhlengahlengiso oluthile.
Ngale ndlela, akukho mfuneko yokuba siprintwe kwindawo yokusebenza, kodwa njengoko uninzi lwezakhiwo zenziwe njengoko imephu zokuphuma zifunwa. Ukufaka indawo engaphezulu kwendawo enye kwimephu, ibizwa ngokuba sisalathiso, nokuba kukodwa okanye kwenye, kwaye kusikwa kwiipoligoni. Ukuba ufuna ukutshintsha isikali, emva koko ifayile yesalathiso iyatshintshwa.
Ukuba ujonga, ulwalamano phakathi kweMicrostation kunye ne-AutoCAD lutshintsho koku, kuba kukho indawo yokusebenza, eneefestile zomzobo ofanayo kunye nobukhulu obuphantsi kwembonakalo yakho. I-AutoCAD inenzuzo yokufowuna kunye nokusondela ngaphandle kokubuya kakhulu, i-Microstation ifumana inzuzo yokusebenza kunye neefayile ezininzi zokujonga kwiimeko ezahlukeneyo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Njengoko ukudala kwibloko Microstation (Cell)
Post Next Uphefumulelwe i-2011Okulandelayo "
I-2 iphendula "kwiiMicrostation: Shicilela iiMephu kwiWebhusayithi"
Izinto ezintle, ezinolwazi kakhulu. imibuliso kunye nombulelo.
Kumfanekiso wesithathu, uMlinganiso weNqaku, kule meko ndifuna ukwenza iimephu ze-1: I-1,000 leyo lelona nqanaba liza kulikhetha.
Ukuba akunjalo, iphepha elincinci kakhulu kunye neseli enkulu iya kuphuma.